Fitakiana fitsaram-bahoaka any Vangaindrano : raikitra ny barazy, mitady hivadika fandrobana ny raharaha | NewsMada
Fitakiana fitsaram-bahoaka any Vangaindrano : raikitra ny barazy, mitady hivadika fandrobana ny raharaha
Tapaka hatry ny omaly ny lalam-pirenena faha-12, eo Lopary, 16 km tsy hidirana an’i Vangaindrano. Nosakakan’ny olona vato ny arabe ka tsy afaka mifamoivoy ny fiara tsotra sy ny taksiborosy. Mitady hivadika fandrobana ny raharaha fitakiana fitsaram-bahoaka any an-toerana.
Taorian’ny savorovoro nitranga tany Vangaindrano, afakomaly hariva, nitohy ny alina sy omaly ny fanaovan’ny olona barazy tany an-toerana. Nosakanan’ny olona tamin’ny vato sy tany ary hazo ny arabe tany Lopary, 16 km tsy hidirana an’i Vangaindrano. Tsy nisy fiara afaka nivoaka sy niditra an’i Vangaindrano omaly hatramin’ny ora nanoratanay. Voasava ny fiara rehetra, indrindra ireo avy any Vangaindrano, noho ny fiheveran’ny olona fa mety mitondra ireo telo lahy notakina hanaovana fitsaram-bahoaka.
Raha tsiahivina, mifangaro ny hatezeran’ny olona amin’ny tsy fisian-jiro sy rano, sy ny fitakian’ny fokonolona avy any Lopary ny hampiharana fitsaram-bahoaka ireo telo lahy nosamborin’ny zandary, voarohirohy amin’ny famonoana tovovavy iray, 19 taona, mpianatra amina sekoly tsy miankina iray any an-toerana, hita faty ny alarobia 11 janoary lasa teo.
“Aleo ho tonga izay “renfort” eo”, hoy ny hikiakan’ireo olona nanao barazy, sady nilanja hazo. Mitaraina ny olona sasany, indrindra ireo mpiavy, raha azo tamin’ny finday, fa matahotra ny amin’ny fisian’ny mpanararaotra. Misy mikasa handroba mantsy ny mpivarotra any an-toerana, ary tapitra mikatona avokoa. Efa ny afakomaly no nisian’ny mpandroba tamin’izany, saingy niditra an-tsehatra ny zandary ka voaparitaka ihany ireo andian’olona. Hatramin’ny tobin’ny Jirama any an-toerana no nokasain’ny sasany hodorana.
Andanin’izany, fantatra fa nandefa zandary mpanampy sy miaramila avy any Manakara sy Farafangana ny eo anivon’ny zandarimaria handamina ny raharaha. Raha ny ao Vangaindrano tampon-tanàna, efa milamindamina. Rakotra zandary mirongo basy ny tanàna. Mbola voatazona ao amin’ny toby any an-toerana ireo telo lahy takian’ny olona hatao fitsaram-bahoaka. Tsy nisy aloha ny poa-basy hatramin’ny ora nanoratanay.
Tsy hanaiky fitsaram-bahoaka ny zandary
Efa nilaza ny zandary, ny lehibeny mihitsy taorian’ny fitsaram-bahoaka nahazo ilay zandary tany Mananjary farany, fa tsy hanaiky fitsaram-bahoaka mihitsy. Raha ny tany Vangaindrano aloha, voafehy hatreto ny fikasan’ny olona hamono ireo telo lahy, voalaza fa namono nahafaty tovovavy mpianatra. Afakomaly, niafara tamin’ny fanapoahana basy nanao tifi-danitra sy lakrimozena ny nanaparitahan’ny mpitandro ny filaminana ny olona nitangorongorona teny amin’ny manodidina ny biraon’ny zandary, niandry ny famoahan’ireto farany azy telo lahy hatao fitsaram-bahoaka.
Mifamahofaho eo ny rahahara. Mitambatra ny hatezeram-bahoaka amin’ny firongatry ny tsy filaminana, sy ny olana sosialy toy ny delestazy sy ny fahantrana. Rehefa misy ny zava-mitranga, maro ny mpanararaotra mandroba, sns. Ahiana ny hiverenan’ny tahaka ny tamin’ny taona 2009. Eo ihany koa ny resa-politika maloto, izay mety any ambadimbadika any?